London, Dabkii Grenfell Tower: Tiradii geerida oo sare u kacday – Kasmo Newspaper
London, Dabkii Grenfell Tower: Tiradii geerida oo sare u kacday
Updated - June 15, 2017 3:35 pm GMT
London (Kasmo), Waxaa ka soo wareegatay in ka badan 24 saac hadda dabkii naxdinta lahaa ee jilbaha u riday daartii dheereyd ee Grenfell Tower kuna taallay Woqooyiga Kensington ee casimadda London. Kooxaha gurmadka ayaa xalay oo idil ku hawlanaa baadigoobka, laakiin mas’uuliintu waxay caddeeyeen in an la filayn cid kale oo nool halkaas in loogu tago.
Afhayeen u hadlay Scotland Yard ayaa sheegay in tirada geerida ilaa hadda la xaqiijiyay marayso 17 qof, tiradaasina sii kordhi karto iyada oo dad badani wali la la’yahay, wuxuuna ku daray in ayan jirin wax tuhun ah oo ku saabsan argagixisada.
Tirada rasmiga ah ee dhaawacyada ilaa hadda lagu dabiibayo isbitaallada London ayaa noqotay 37 qof oo 17 ka mid ah xaaladdoodu ku sugantahay badbaadinta culus “Intensive Care”.
Xaaladda haraagii dhismaha ayaa nugul, taas oo u suuragalin weyday ciidanka Dabdamiska in ay sii wadaan baritaan qoto dheer, iyada oo qudhoodu 9 ka mid ah kaga dhaawacmeen. Dhismahaas waxaa degganaa dadyow fara badan oo ka soo kala jeeda qowmiyado kala duwan oo Soomaali ku jirto, tafaasiishoodana waxaa la ogaan doonaa saacadaha iyo maalmaha soo socda.
Subaxnimadii maanta waxaa halkaas booqasho gaaban ku tagtay R/Wasaare Theresa May waxayna la kulantay qaar ka mid ah ilaaladii iyo dabdamiskii meesha joogay. R/Wasaaruhu waxay amartay in baritaan qoto dheer oo madaxbannaan laga samayn doono sidii khasaaraha intaan le’eg uu ugu dhacay dadkii dhismahaas ku noolaa.
Qaar ka mid ah dad goobjoog ahaa waxay Twitterka ku qoreen in Theresa May ayan la kulmin dadkii xaafadda iyo warfidiyeenka toona, taas oo dhalisay carada iyo dhaliilaha Baraha Bulshada.
Wax yar ka dib waxaa goobtaas gaaray Jeremy Corbyn, hoggaamiyaha Labourka, kaas oo la kulmay mutadawiciintii dadka u gurmatay. Hadal uu u jeediyay dadweynihii xaafadda wuxuu u sheegay in xisbigiisu daba gali doono mas’uuliyadda wixii dhacay.
Dhambaal tacsi ah wuxuu ka yimid Buckingham Palace, kaas oo Boqoradda Elizabeth iyo odaygeedu Philip ugu duceeyeen dadkii laga dhintay iyo intii ku dhaawacantay, waxayna ammaan u jeediyeen gurmadkii kooxaha dabdamiska iyo guud ahaan dadweynahu fidiyeen,